सबै समय मा, बालिका तथा महिला बढी आकर्षक र आकर्षक विपरीत सेक्स हेर्न चाहन्छु। यो गर्न, हामी सबै सम्भव हालतमा र विधिहरू प्रयोग। हुनत प्रगति र अझै पनि खडा छैन, तर प्राचीन समयमा रूपमा, आधुनिक बालिका पट्टी बेरिएको उपयोग गर्दै छन्, आकार संरक्षण र राम्रो आकार मा आफ्नो छाला कायम गर्न।
लपेटन आकार दिन - सिर्जना र आफ्नो सपना को शरीर मोडेलिंग लागि सबैभन्दा लोकप्रिय उपकरण को एक। साथै, epidermis को उपचर्म तहहरू प्रक्रिया को माध्यम द्वारा बलियो र छाला थप लोचदार र रेशमी बनाउन सकिन्छ। खैर, यसको प्रजाति सबैभन्दा प्रभावकारी को एक सेल्युलाईट लड्न बस पट्टी बेरिएको छ।
यो सबै संरचना निर्भर शरीर गर्न आवेदन लागि प्रयोग गर्न, धेरै प्रजातिहरू विभाजन गरिएको छ। यो घर मा पट्टी र्याप गरिरहेको अघि, तपाईं यसलाई contraindications एक नम्बर छ रूपमा, एक ब्यूटिशियन परामर्श लिनु आवश्यक छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। यसबाहेक, यो एक विशेषज्ञ तपाईं समस्या क्षेत्रमा पहिचान र आफ्नो छाला को लागि सही मेकअप पाउन मदत गर्न सक्छ छ।
तसर्थ, हामी यो भन्दा लोकप्रिय प्रकार विचार गर्नुहोस्।
वार्मिंग पट्टी बेरिएको
यो सबैभन्दा प्रभावकारी प्रकार मध्ये एक छ, बोसो बाल्न मद्दत गर्छ र आंकडा बहाना एउटा छोटो समय अनुमति दिन्छ।
को epidermis मा प्रभाव लपेटन यस प्रकारको संग कैफीन, रातो खुर्सानी वा विभिन्न phytoextracts जल आधारित विभिन्न gels लागू गरेर हुन्छ। यी सबै पदार्थ बोसो पाचन प्रक्रिया, क्युटेनियस Tissues गर्मी बढाउने डिजाइन र यसरी छाला सबै आवश्यक भिटामिन पोषण र लाभदायक तत्व पहिल्याउन।
शरीर बाट लसीका तरल पदार्थ को अतिरिक्त हटाउने, सुनिंनु हटाउन आवश्यक भएमा यस्तो विधि लागू गरिएको छ। यस मामला मा, gels प्रयोग मुख्य सक्रिय घटक ब्लूबेरी हुनेछ, पुदीना, घोडा ओखर र यस्तै एंटीओक्सिडेंट।
साथै, लपेटन यस प्रकारको haematomas र भास्कुलर fragility को गठन रोक्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस्तो प्रक्रिया को पाठ्यक्रम पछि capillaries को पर्खालहरु बलियो भइरहेको छ र लसीका जल accelerates।
यो विधि त्यहाँ एक एकदम राम्रो-परिभाषित उठाने प्रभाव छ, त्यहाँ छाला को एक धेरै राम्रो कस किनभने, जो कारण को लागि, अचानक नाटकीय वजन गुमाएका, महिला लागि आदर्श छ। संग लपेटन यस प्रकार gels र विभिन्न रचनाहरूको संग गर्भवती पट्टियाँ प्रयोग गरिन्छ। सामान्यतया यो विधि थर्मल पानी, प्रयोग गरिन्छ अंगूर बीउ निकाल्ने, रक्सी phytoextract गाजर, ऋषि र अन्य जडीबुटी। र्याप यस प्रकारको छाला कक्षहरूको गहिरो पोषण, यो मिलेका छ, कडा र सही टोन मा आउछ यो कारण छ।
विरोधी सेल्युलाईट शरीर र्याप
अर्को लोकप्रिय प्रकार चिसो छ विरोधी सेल्युलाईट शरीर र्याप। यो कि सजिलै कुनै पनि महिला घरमा आफ्नै पकड गर्न सक्छन् प्रजाति मध्ये एक हो।
चिसो विरोधी सेल्युलाईट शरीर र्याप मात्र जन्माउने समस्या को छुटकारा हुनेछ सहायता प्राप्त - सेल्युलाईट, तर पनि खनिज र भिटामिन संग छाला कक्षहरू पोषण। साथै, सबैसँग, अपवाद बिना, यो एकदम गर्म विधि देखि यो distinguishes जो कुनै contraindications, छ रूपमा अनुरूप यस्तो प्रक्रिया। चिसो तापमान मा लपेटन लागू संरचना त्यहाँ vasoconstriction छ र शरीर सबै अनावश्यक toxins को शुद्ध छ यसरी, 21-22 डिग्री भित्र फरक हुन्छ। पनि चिसो उपचार लागि हालतमा यस्तो हरियो वा मेन्थल रूपमा विशेष पदार्थ र एक ठंडा प्रभाव संग समावेश गर्न सक्छन्।
लपेटन परिणाम हेर्न, एक निश्चित मार्ग पछ्याउने गर्नुपर्छ। र यो यति हुनुपर्छ:
शरीर को मात्रा मा कम;
छाला चमकिलो चिकना;
शरीर को पूर्ण detoxification।
चिसो र्याप कुनै विशिष्ट contraindications छ भएकोले, त्यसपछि लागू यो शरीर देखिने खण्डका चिह्न संग, खुट्टा मा सुनिंनु हुन सक्छ, र पाठ्यक्रम, सेल्युलाईट।
निस्सन्देह, अब माथि विधिहरू सबै प्रकारका कुनै पनि सौन्दर्य को सेवाहरूको सूची पाउन सकिन्छ, तर यो त्यहाँ अभियान लागि निःशुल्क समय र पैसा फेला पार्न सम्भव सधैं छैन। त्यसैले गरेको हेरौं घरमा विरोधी सेल्युलाईट शरीर wraps, व्यञ्जनहरु पर्याप्त सरल छन्।
त्यसैले, तपाईं प्रक्रिया सुरु गर्नु अघि तपाईंले सही पोषण संरचना गर्न जोखिम लागि छाला तयार गर्न आवश्यक छ। यो गर्न, यो हुन एक साफ संग पूर्व-साफ गर्न आवश्यक छ। आवश्यक संरचना समस्या क्षेत्रमा लागू हुन्छ पछि, सबै अपनाउँछन् फिलिम, र एक घण्टा न्यानो कम्बल अन्तर्गत सुत्न यस्तो आवश्यकता रूपमा zamatyvaetsya। कि पछि, सञ्चय तैयार को remnants न्यानो चलिरहेको पानी कुल्ला र यो एक ठंडा प्रभाव भने एक पोसिलो छाला क्रीम, यो राम्रो छ लागू गर्न आवश्यक छ। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, एकदम सजिलो बाहिर घरमा विरोधी सेल्युलाईट शरीर wraps पूरा गर्न। प्रक्रिया को लागि व्यञ्जनहरु रचनाहरूको तल छलफल गरिनेछ।
माटो संग लपेटन
कुनै पनि माटो र्याप गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ -, कालो पहेंलो, नीलो, आदि ...
माटोलाई राम्रो जोखिम लागि, तपाईं सुन्तला र Rosemary को आवश्यक तेल को केही घटेको थप्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, र्याप तातो छ भने, माटो (2 Tbsp। एल) ड्राई तोरी पाउडर थपियो गर्न सकिँदैन (1 घन्टा। एल) अनि एक homogeneous ठूलो प्राप्त गर्न पानी संग पतला। छाला को लपेटन समयमा नै समय मा एक जलन महसुस हुन सक्छ। यो संरचना सही तयार छ भन्ने संकेत गर्छ। बलिरहेको पर्याप्त बलियो छ भने, प्रभाव बन्द गर्नुपर्छ, र अर्को समय तोरी पाउडर को मात्रा कम गर्नुहोस्। शरीर 20 मिनेट मा मेकअप राख्न, त्यसपछि नुहाउनु र छाला मइस्चराइजर मा राखे। माटो दुवै चिसो र तातो र्याप मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यो प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, सबै भन्दा राम्रो सानो घर मा गरेको छ, तर पनि घर मा पनि सम्भव छ। शैवाल बिक्री एक औषधि पसल मा लागि wraps। प्रयोग गर्नु अघि, तिनीहरूले कोठा तापमान मा पानी मा भिगो हुनुपर्छ (3 Tbsp। शैवाल पानी 250 एमएल चम्चा) kashitsepodobnoy स्थिरता गठन गर्ने। कि पछि, तिनीहरूले आफ्नो शरीर को समस्या स्थानहरू लागू गर्न सकिन्छ। शरीर को संरचना लागू गरेपछि पनि टांसिनु फिलिम संग र्याप र एक समय को लागि कार्य गर्न छोड्नु गर्न आवश्यक छ। प्रक्रिया पछि, सबै शैवाल न्यानो पानी धोएका छन्।
सेल्युलाईट विरुद्ध लड्न प्रभावकारी उपकरण अर्को चिकित्सा प्रक्रिया हो। यो एक अपेक्षाकृत नयाँ छ र नाम थियो टी-आघात-र्याप। यस प्रकारको यो नै जेल, पट्टी wraps गर्न नुन र पट्टियाँ छ वास्तवमा एक कुरा को रूप मा, सैलून र घर मा उपलब्ध छ। यसको संरचना को आधार बिरुवाहरु, आफ्नो खर्च नगरेर र lipolytic गुण लागि जानिन्छ देखि पोषक को हुड छ। टी-आघात-र्याप शरीर थप supple र taut छाला को मात्रा मा एक कमी प्राप्त गर्न छोटो अवधि तपाईंलाई मदत गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, पूरै रूपमा बुढ्यौली र शरीर को क्षय को प्रक्रिया सुस्त प्रक्रियाहरु को एक पाठ्यक्रम पछि। तसर्थ, यस प्रकारको युवा बालिका, तर महिला मात्र होइन उमेर प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यो प्रक्रिया पट्टी wraps को अन्य प्रकार कुनै फरक हो, त्यसैले यसलाई तपाईं कुनै पनि असुविधा वा दुखाइ कारण छैन।
सेल्युलाईट विरुद्ध लडाई मा सबै भन्दा प्रभावकारी उपकरण अर्को एक विशेष डिजाइन "Severyanka" कम्पनी बाट रकम को दायरा छ।
पट्टी र्याप "Severyanka" तपाईं कुनै पनि समस्या आवेदन ठाउँ र केवल 40 मिनेट को जोखिम को समय बिगार्छ छैन किनभने दिन छैन। साथै, कस्मेटिक्स को यो लाइन धेरै आर्थिक वित्तीय मामलामा विदेशी समकक्षों तुलनामा उपचारात्मक र निवारक गुण छैन र अधिक महंगा मूल्य खण्डको सानो प्रतियोगिहरु छन्।
wraps को प्रभावकारिता मा एक महिलाको राय
धेरै बालिका र महिला, हाल wraps तरीकाहरु को कुनै पनि गर्न लागू, छाला को आकार र अवस्था मा परिवर्तन को सकारात्मक परिणाम उल्लेख गरे। तिनीहरूले यस्तो प्रक्रिया को प्रशंसक भन्न, यो एक साप्ताहिक आधार कम्तिमा एक पट्टी बेरिएको मा गरेको भने सही शरीर को गठन मा उत्कृष्ट परिणाम हासिल गर्न सम्भव छ। प्रायजसो समीक्षा त्यस्तो प्रक्रिया व्यायाम र उचित आहार, तिनीहरूलाई अझ ठूलो प्रभाव प्रदान गर्नेछ जो संग संयुक्त हुनुपर्छ भन्ने तथ्यलाई कम।
Elena Malysheva आहार: समीक्षा नियम र मेनू
कार्डियो कसरत - यो राम्रो स्वास्थ्य बाटो छ
Vibro Slimming - अल्छी लागि आदर्श
मकै porridge आहार: समीक्षा। Polenta: नुस्खा
बोसो बल्न सूप - वजन गर्न छिटो तरिका
सबै भन्दा लोकप्रिय शरीरको वजन हानि लागि wraps: समीक्षा र व्यञ्जनहरु
रगत बढेको ग्लूकोज: यो अर्थ के, को कारण, लक्षण र उपचार सुविधा
कसरी र कुन दाँत पहिलो बच्चा कटौती गर्दै हुनुहुन्छ?
जहाँ प्रयोग मानव जगतले मा सञ्चालन
औषधि "papaverine"। निर्देशन लागू मा मदत गर्नेछ
को बाहुला मा नुस्खा पोर्क बच्चाहरु पिंडली
Tulle को petticoats कसरी सी गर्न? सिफारिसहरू
पनीर multivarka - धेरै स्वादिष्ट र स्वस्थ व्यवहार!